Maqaalka Ashwini Dave ee Martech Zone |
Maqaallada by Ashwini Dave
Markii ay soo ifbaxday qiimeynta ganacsiga, dib u eegista khadka tooska ah, iyo warbaahinta bulshada, dadaalada taageerada macaamiisha ee shirkadaadu hada waxay muhiim u yihiin sumcadda sumcadaada iyo khibrada macaamiishaada ee internetka. Si hufan, si dhab ah, dhib malahan inta dadaalkaaga suuqgeyntu u weyn yahay haddii taageeradaada iyo waayo-aragnimadaadu ka maqnaato. Sumadda shirkaddu waa sida sumcadda qofka oo kale. Waxaad ku kasbanaysaa sumcad adoo isku dayaya inaad waxyaabo adag si fiican u qabato. Jeff Bezos Ma macaamiishaada ayaa ah adiga